I-China Felt coasters & ifektri yama-placemats nabakhiqizi | Huasheng
Fasters coasters & placemats
Ama-coasters ethu azwayo & ama-placemat enziwe ngoboya bezintombi ze-merino bazizwa, abenze bangahlali isikhathi eside futhi banobuhle kuphela, kodwa futhi babahle.
Zilungele iziphuzo ezishisayo nezibandayo, futhi iphrofayili elula nezinto ezithambile zenzelwe ukusebenza ngaphakathi komongo wesikhala sakho sokusebenzela noma sekhaya.
Into Fasters coasters & placemats
Okokusebenza U-100% we-merino wool
Ubukhulu I-4x4 '', noma ihlelwe ngokwezifiso
Izimo Round, hexagon, isikwele, njll.
Icubungula izindlela Ukufa ukusikwa, ukusikwa kwe-laser.
Inketho yokuphrinta Ukuphrinta kokuphrinta kokudlulisa kwe-Silkscreen.
Inketho yokulanda Ukuskena kwe-Laser, isilika, ukulebula okwelukiweyo, isikhumba okugqokwa ngaso, njll.
Uboya bethu obu-100% buye babuzwa futhi bungumthombo wemvelo, ovuselelekayo okusho ukuthi awunazo izinto ezinobuthi ezingalungile. Kuyindlela eqhubekayo, engakheka kahle ye-eco-friendly ekhaya.
[Kuhle futhi kuthambile]
Yenziwe ngoboya be-merino ethambile, iziphuzo zethu zokuphuza zinomusa ebusweni bakho futhi zinikeza indawo enhle yokufikelwa ingilazi yakho noma inkomishi. Ngeke yini kudala ukulimala njengemabula noma itshe uma ngehle ngengozi.
[Yiminyene futhi ihlala isikhathi eside]
Uwoyela we-Merino uzizwe uhlukile njengoba uhlanganiswa nezicucu ezinhle kakhulu nezithambile ezixhunywe ngokuqinile ngaphansi kokushisa okukhulu nengcindezi. Umuzwa odlulile awugqinsi, awugqinsi futhi awuzukukhotha, akhiphe noma aphule.
Ama-Woolen coaster pads awukukhetha KAKHULU. Ziyakwazi ukuvuseleleka futhi zinokwenzeka ngezinto eziphilayo. Uboya buye bunezakhiwo ze-ANTI-BACTERIAL ngenxa yokuba khona kwendalo kwe-lanolin.
Ngenhlanhla uvolo ngokwemvelo umelana nokungcola kanye namabala. Njengayo yonke into ekhaya lakho, izodinga ukuhlanzwa ngezikhathi ezithile. Isinyathelo sokuqala esihle kungaba ukuzama ukuhlanza ngendwangu emanzi. Zingahlanzwa futhi ngamanzi apholile kusetshenziswa umshini wokubambisa omnene bese zibekwa phansi ukuze zome. Lokhu kwenziwa kusuka ku-100% we-merino wool ngakho inqubo izofana nokunakekela izingubo zoboya ezisezingeni.
Uboya futhi buwukhipha ngokuhlukile ngokunxeshezelwa. Umswakama ugxiliswa imicu yoboya ye-coaster-ishiya ifenisha yakho iphephile ekulimaleni (futhi i-coaster yakho inganamatheli engilazini yakho).
Esedlule: Felt keychain
Olandelayo: Thambisa isitshalo